Guam inotangisa Kupinda Kwenhare kune Fomu Yemagetsi Ekuzivisa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » Guam inotangisa Kupinda Kwenhare kune Fomu Yemagetsi Ekuzivisa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • wedzero • Hurumende Nhau • Zimbabwe Breaking News • nhau • vanhu • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Guam Vashanyi Bureau
Guam inharaunda yeUS 7 maawa ekubhururuka kubva kuHawaii uye ine yayo tsika tsika.
Nhasi Guam yakazivisa kuve yekutanga nzvimbo munyika kuita tekinoroji yemagetsi yekuzivisa kwetsika.
Iyo Guam Visitors Bureau (GVB), ichishanda pamwe neGuam Customs uye Quarantine Agency (CQA), uye neGuam International Airport Authority (GIAA) vakazivisa zviri pamutemo webhusaiti yeGuam Electronic Declaration Fomu (EDF).
Ichi chikamu chechipiri uye chekupedzisira chekuitwa kweEDF, iyo yakaunzwa zviri pamutemo kutanga kwaKurume 2021. Chikamu chekutanga chechirongwa ichi chaive nevatakuri mune dzimwe nendege vanozadza iyo EDF kuburikidza nema kioski akasarudzwa munzvimbo yekutakura nhumbi panhandare yendege.
Guam ndiyo imwe yenzvimbo dzekutanga pasi rose kushandisa mhando iyi yehunyanzvi.
“Guam ndiyo imwe yenzvimbo dzekutanga pasi rose kushandisa mhando iyi yehunyanzvi. Shoma nyika, seBali, parizvino iri kupa iri nyore fomu yedhijitari kune vafambi. Tinoda kutenda Gavhuna Lou Leon Guerrero nekuramba achitsigira. Akapa zviwanikwa kuti avandudze mafomu edu ekuzivisa tsika nekukonzera kushanduka kweindasitiri yezvekushanya mudenda iri, "akadaro Mutungamiri weGVB uye CEO Carl TC Gutierrez. "Si Yu'os Ma'åse 'kuna Ike Peredo neCQA, pamwe naJohn Quinata neGIAA nekushandira pamwe kwavo kubatsira kuita kuti chitsuwa chedu chishande zvine mutsindo."
"Mushure memwedzi yekuronga uye kuyedza, tinofara kuenda kumberi nekumisikidzwa zviri pamutemo kweiyo nharembozha yeEDF," akadaro Ike Q. Peredo, Director weCQA.
Nekuvhurwa nharembozha, vese vanosvika vafambi kuenda kuGuam vachakwanisa kuzadza iyo EDF pamakomputa avo vega kana nharembozha kusvika maawa makumi manomwe nemaviri vasati vasvika kuGuam.
“Izvi zvinorevei kuna Tan Maria kana Tun Jose ndechekuti hunyanzvi uhu hunoita kuti zvive nyore kuti mhuri dzavo dzivabatsire kuzadza mafomu avo nguva isati yakwana. Havafanirwe kunetseka nekuzadza ivo vachiri mundege futi, ”akadaro Gutierrez.
Iyo nharembozha inoratidzira chikamu chekupedzisira cheEEDF kuburitswa iyo inogonesa kuwana kwepasirese kune iyo Guam inosungirwa fomu yekuzivisa. GVB inokurudzira vese vafambi kuti vatore mukana weiyo mazuva matatu-ekufanirwa hwindo vasati vakwira kuti vabate zvachose nzira yekupinda neCQA.
"Pakutanga takaronga kuburitsa kunze kweEDF kuti tione kuvimbika kwehurongwa uye kuchengetedza ruzivo rwevatakuri panguva yese iyi," akadaro Nico Fujikawa, GVB Director we Tourism Tourism. "EDF ndiyo mhinduro yenguva refu isingabatike iyo Guam ichapa kune vese vafambi vemuno nevashanyi isu tichifambira mberi."
Iyo EDF ikozvino inogona kuwanikwa online pa cqa.guam.gov kana chemada.landing.cards. Akasarudzika EDF ma kiosks mukati enzvimbo yekutakura mukwende yenendege yeGuam ichave inowanikwa.